प्रायः सोधिने प्रश्नहरू - Lianying शिक्षा र टेक्नोलोजी कं, लिमिटेड
किन तपाईंको कम्पनीले यति धेरै उत्पादनहरू बेच्छ?
हामी एउटा कारखाना हो र संयुक्त बिक्री पनि लागू गर्दछौं। हामी सत्तरी वा अस्सी निर्मातासँग घनिष्ट सहयोग पुगेका छौं, र हामीले प्राप्त गर्ने मूल्यहरू सबैभन्दा अनुकूल छन्।
तपाईंले कुन प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुभयो?
हामीले IS014001: २०१ got पायौं। ISO9001: २०१,, OHSAS45001: 2018 र सीई प्रमाणपत्रहरू।